Izindaba - Ukuvikelwa kwemvelo nokusimama-umkhuba wezindwangu zemvelo entwasahlobo nasehlobo lika-2022
Ukuvikelwa kwemvelo nokusimama-ukuthambekela kwezindwangu zemvelo entwasahlobo nasehlobo lika-2022
Yize ubhadane lomqhele olusha lubangele ezinye izinxushunxushu emphakathini, umqondo wokuvikelwa kwemvelo usengumbono wabathengi nemikhiqizo. Ukuqonda kwabantu ukuthi imvelo yomhlaba iyithinta kanjani impilo yabantu kuyaqhubeka nokujula, nokuvikelwa kwemvelo sekuvele kuyinto ebalulekile ebhekwa ngumphakathi. Kumkhakha wendwangu yendwangu, ukuthi ungabeka kanjani izixazululo ezisimeme kusuka ku-fiber kuya emfashini, sebenzisa imicu yemvelo ukunciphisa umthelela emvelweni, futhi uqaphele ukuthengwa kokuphinda kusetshenziswe ngokuphelele ngokusebenzisa ubuchwepheshe bedijithali. Sizoba umkhuba omkhulu wokuthuthuka wemboni yezingubo ngokuzayo. Ngakho-ke, le ngqikithi izogxila ku-organic cotton fiber, ukotini wemibala yemvelo, ezolimo ezivuselelekayo zemvelo, ukudaya izitshalo, umsebenzi wezandla onensa, ukuvuselelwa kabusha neminye imiqondo yokuvikela imvelo ukudala indlela yokuphila enhle eluhlaza. Kuzoba futhi nentuthuko ebaluleke kakhulu embonini yendwangu eminyakeni embalwa ezayo. Funa abashayeli.
I-organic fiber cotton
Umqondo osemqoka: Ukotini we-organic luhlobo lukakotini wemvelo omsulwa nongcolisiwe. Ekukhiqizeni kwezolimo, umanyolo ophilayo, ukulawulwa kwezinto eziphilayo nezinambuzane nezifo, kanye nokuphathwa kokulima kwemvelo kusetshenziswa kakhulu. Imikhiqizo yamakhemikhali ayivunyelwe, futhi ukungcoliswa komoya kuyadingeka enqubweni yokukhiqiza nokuphotha. ; Inezici zemvelo, ukuvikelwa okuluhlaza nokuvikelwa kwemvelo. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukutshalwa kwezinto eziphilayo kunciphisa umthelela kakotini emvelweni, ngaleyo ndlela kusize ekwenzeni ngcono ukuhlukahluka kwemvelo nempilo yenhlabathi, futhi kunciphise amakhemikhali anobuthi. Izinhlobo ezifana ne-H & M ne-Uniqlo zitshale imali ezinhlelweni zikakotini eziphilayo ukuhlangabezana nezidingo zabathengi "isinyathelo sokwandisa ukotini." Ngakho-ke, izintambo zikakotini eziphilayo zijoyine ubambiswano lwezindwangu oluqhubekayo.
Inqubo ne-Fibre: I-organic organic cotton fiber itshalwa ngendlela yemvelo kuphela. Isisekelo semvelo kufanele sitholakale endaweni lapho umoya, amanzi nenhlabathi kungangcolisiwe. Indwangu eboshwe ngokotini ophilayo inokukhanya okukhanyayo, ukuzwa kwesandla esithambile nokuqina okuhle kakhulu; inezindawo ezihlukile zokulwa namagciwane neziphunga; iqeda izimpawu zokungezwani komzimba futhi ilungele ukunakekelwa kwesikhumba. Isetshenziswa ehlobo futhi yenza abantu bazizwe bepholile futhi bekhululekile.
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: I-organic organic cotton fiber ilungele izindwangu zemvelo ezifana nekotini, ilineni, usilika, njll, futhi ingasetshenziswa kuzidingo zesigcawu ezihlukahlukene. Kusebenza ekwakhiweni kwazo zonke izinhlobo zemikhiqizo yokugqoka entofontofo.
Ukotini wemibala yemvelo
Umqondo obalulekile: Isikhathi eside, abantu bebazi kuphela ukuthi ukotini umhlophe. Eqinisweni, ukotini onemibala wawusuvele ukhona emvelweni. Umbala walekotini uyisici semvelo, esilawulwa yizakhi zofuzo futhi singadluliselwa esizukulwaneni esilandelayo. Ukotini wemibala yemvelo wuhlobo olusha lwendwangu yendwangu esebenzisa ubuchwepheshe besimanje bioengineering ukuhlakulela uhlobo olusha lwezinto zendwangu ezinemibala yemvelo lapho ukotini ukhishwa. Imikhiqizo kakotini enemibala iyasiza empilweni yomuntu; ukuncishiswa kwezinqubo zokuphrinta nokudaya enqubeni yendwangu kubhekelela isiqubulo esithi "uguquko oluhlaza" esethulwe isintu, kunciphisa ukungcoliswa kwemvelo, kusiza izwe ukuthi liqhubeke nokugcina isikhundla salo njengomthumeli omkhulu wezindwangu, futhi kuphula "ukuhweba okuluhlaza okomhlaba jikelele" ”. Izithiyo ”.
Inqubo nefayibha: Uma kuqhathaniswa nokotini ojwayelekile, imelana nesomiso kakhulu, imelana nezinambuzane, ukusetshenziswa kwamanzi futhi okufakwayo kwabalimi kuphansi. Imicu ekotini enemibala yemvelo imifushane futhi intekenteke kakhulu kunamanye ama-cotton ephilayo. Izinhlobo zombala zilinganiselwe kakhulu, ezinye azivamile, futhi isivuno siphansi. Ukotini wemvelo onemibala awunakungcoliswa, konga amandla futhi awunabo ubuthi. Umbala kakotini wethula umbala wemvelo ongadayiwe, obomvu, oluhlaza okotshani nonsundu. Ayipheli futhi inokumelana okuthile nokukhanya kwelanga.
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: I-fiber yemvelo yemibala, efanelekile ukuthuthukiswa kwemikhiqizo yendwangu yezingubo ezilungele isikhumba, imvelo, ingadayi. Umkhiqizo weHarvest & Mill, isitayela esiyisisekelo sikakotini onemibala ephilayo uyatshalwa, wenziwa waba ngcono futhi uthungelwe e-United States, futhi izinto zikakotini zohlelo olulinganiselwe ziyashoda.
Ezolimo ezivuselelekayo eziphilayo
Umqondo ongukhiye: Ipulazi le-Organic ikakhulukazi lisho ukutshalwa kwezithelo nemifino ngaphandle kokubamba iqhaza kwamakhemikhali, nokuphathwa kwesayensi njengokuluhlaza okujwayelekile kanye nokwemvelo njengomqondo. Lesi senzo singabuyisa inhlabathi, sivikele izilwane, sithuthukise amanzi futhi sandise ukuhlukahluka kwemvelo. Imikhiqizo yezolimo engokwemvelo iyimikhiqizo esezingeni eliphakeme eyaziwayo emhlabeni wonke, engangcolisi futhi evikela imvelo. Ngakho-ke, ezolimo eziphilayo zenzelwe ukuthuthukisa ukuncintisana kwemikhiqizo yezolimo yezwe lami emakethe yamazwe omhlaba, ukukhulisa imisebenzi yasemakhaya, imali engenayo yabalimi, nokwenza ngcono umkhiqizo wezolimo.
Ama-Crafts & Fibers: UPatagonia, iphayona kwezolimo elivuselelekayo, ngohlelo lwayo lwe-ROC, uqhuba i-fiber yemvelo nokuvumelana ukuqoqwa kokudla, futhi ubambisana namapulazi angaphezu kwe-150 eNdiya ukunikezela ngezindwangu ze-fiber zemvelo zezingubo. Sungula uhlelo lwendwangu oluvuselelekayo olususelwa ekuphathweni komhlaba.
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: I-Oshadi isebenzisa uhlelo lwe- “From Seed to Sewing”, oluhlose ukwakha kabusha ukukhulisa ukutshalwa kwezitshalo zikakotini nezodayi wemvelo. Iqoqo lokuqala lezingubo zokubambisana lizotholakala ku-inthanethi naku-inthanethi kungekudala. Iqoqo Elinezimpande lomkhiqizo we-Wrangler luchungechunge lokuqala lokuhlanganisa izindawo ezisemaphandleni nomkhiqizo. AmaJeans nezikibha zimakwe igama lepulazi likakotini.
Umqondo obalulekile: Ukudaya izitshalo kusho indlela yokusebenzisa izitshalo ezahlukahlukene eziqukethe izingulube ezikhula ngokwemvelo emvelweni ukukhipha izingulube ukudaya izinto ezidayiwe. Imithombo esemqoka yemibala yezitshalo yi-turmeric, madder, rose, nettle, eucalyptus, nezimbali eziphuzi.
Inqubo ne-Fibre: Imibala yembala odayi bezitshalo ivame ukutholakala ezitshalweni futhi ihlanjululwa ngezinqubo zobuchwepheshe, futhi iyizinto ezinemibala eziqinile nezingenakubuna. Ukusetshenziswa kokudaya izitshalo akukwazi ukunciphisa kuphela ukulimala kodayi emzimbeni womuntu futhi kusebenzise ngokugcwele izinsiza zemvelo ezivuselelekayo, kepha futhi kunciphisa kakhulu ubuthi bokudaya amanzi angcolile, okulungele ukunciphisa umthwalo wokuphathwa kwendle nokuvikela imvelo .
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: Ukudaya izitshalo kunokusondelana okuhle kwemicu yemvelo. Umbala wemibala uphelele kusilika, umbala uyakhanya, futhi ukushesha kuhle. Okwesibili, i-fiber fiber, i-fiber fiber, i-bamboo fiber kanye ne-modal ifaneleka kakhulu; kuyasebenza nakwimicu ethile esetshenzisiwe kabusha. Ifanele izingubo zokulungela ukugqoka nezinsana kanye nempahla yayo, izingubo zangaphansi, ukugqoka kwasekhaya, ezemidlalo, imikhiqizo yendwangu yasekhaya, njll.
Isandla esihamba kancane
Umqondo obalulekile: Ngokungaqiniseki kwesimo somnotho samazwe omhlaba, imakethe yamasekeni esithengisa kabusha nobungcweti be-DIY iyadlondlobala, futhi ukusetshenziswa komqondo wokulahla uziro okhombisa umoya wenkululeko kuyazalwa, kunanela ingqikithi yobungcweti nemfashini ehamba kancane. Kufunwa ngokujulile ngabathengi.
Ubuciko kanye Nemicu: Ngokusebenzisa izindwangu ezikhona zesitoko, izinto nezinto ezisetshenziselwa imvelo ukunikeza ukudlala ugqozi olusha, ukwelukwa, ukufekethiswa, ukuthunga nobunye ubuciko kusetshenziselwa ukwakha isitayela esisha esivamile nesenziwe ngesandla esenziwe ngesandla.
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: Umkhiqizo ulungele ukwenza izesekeli zezandla, izikhwama, okokugqoka nemikhiqizo yasendlini.
Umqondo osemqoka: Ngokocwaningo, zingu-73% izingubo emhlabeni ezigcina zigcwaliswa emgodini wokulahla udoti, ezingaphansi kuka-15% ziphinde zenziwa kabusha futhi i-1% isetshenziselwa izingubo ezintsha. Njengamanje, ukotini omningi usetshenziswa kabusha ngemishini, uhlelwe ngombala, uqotshwe ube yi-fiber yomsikazi bese ufakwa intambo entsha. Kukhona nengxenye encane yendlela yokuguqulwa kwamakhemikhali kukotini ukuyisiza ukuthi ibone umjikelezo. Lokhu kunganciphisa umthelela kwezemvelo wokutshala ukotini oseyintombi, kunciphise ukugawulwa kwamahlathi, ukungcola kwamanzi kanye nokukhiqizwa kwesikhutha.
Inqubo ne-Fibre: Uhlelo lokuvuselelwa kabusha kwendwangu nokuvuselelwa kabusha kungenza kabusha inqwaba yemfucumfucu yezimboni yezimboni kusuka kumikhiqizo yomhlaba nakubathengisi, ngokusebenzisa ukuhlukaniswa kwemanuwali ne-laser, futhi ikuguqule kube yinto evumelana nentambo yokusetshenziswa.
Isiphakamiso sohlelo lokusebenza: Ukuphinda kusetshenziswe kabusha kunamandla okwanda esikhathini esifushane, futhi indwangu entsha yelebula yendwangu isekela ukulandeleka nokuvuselelwa kabusha. Umkhiqizo ulungele ukunitha, ijezi, i-denim nezinye izitayela.
Isikhathi Iposi: Apr-29-2021